Fanafihana Anti-silamo mitarika fifandirana sy miteraka tahotra eo amin’ireo Sri Lankey misaona · Global Voices teny Malagasy
Efa voafehy ny toe-draharah, araka ny manampahefana
Voadika ny 19 Mey 2019 5:58 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, नेपाली, English
Voalaza fa niteraka herisetra anti-silamo ny lahatsoratra Facebook navoakan'ilay mpivarotra silamo tao an-tanàna amorontsiraka antsoina hoe Chilaw, 80km miala an'i Colombo, renivohitra Sri Lanka tamin'ny 12 mey. Tao anatin'ny ora vitsy, nanomboka nanafika ny ankamaroan'ireo tranobe sy ny tranon'ireo Miozolomana tao amin'ny tanàna hafa ao amin'ny faritany Avaratra-Andrefana ny vahoaka. Ny 13 mey, trano teo amin'ny 500, fivarotana, masikiriny (moskea) sy foibe ara-pivavahana hafa no simba, olona ray no maty ary folo hafa no naratra mafy. Nametraka ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina manerana ny firenena hatramin'ny 14 mey maraina ny manampahefana, tao anatin'ny tahotry ny fipariahan'ny fanafihana .
Nitranga taorian'ny fanafihana daroka baomba tamin'ireo fiangonana sy hotely nandritra ny fankalazana ny Paska izay namoizana olona 258 sy nanozongozona ny firenena tamin'ny 21 aprily 2019 izany. Raha nipoitra ny antsipirihan'ireo tranga tamin'ny Paska, dia fantatra fa ireo antoko Islamika hiringiringy eo an-toerana ireo mpanafika ary maro tamin'izy ireo no maty tao anatin'ny famonoan-tena tamin'ny alalan'ny daroka baomba. Betsaka ireo nanahy fa ny vondrom-piarahamonina Miozolomana eo an-toerana no lasibatra toy ny mpisolo vaika ny ankalana tamin'ny asa fampirohorohona nandritra ny herisetra naharitra zato taona nataon'ny ankamaroan'ny Sinhala maro an'isa tamin'ireo Tamil, Silamo sy Kristianina vitsy an'isa.
Nanoritsoritra i Tisaranee Gunasekara hoe ahoana no niatomboka tamin'ny lahatsoratra bilaogy ho any Groundwiews ny herisetra vao haingana:
Nanambara ilay mpivarotra Silamo araka ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook hoe” Aza mihomehy intsony, indray andro any hitomany ianareo”, izay mety ho nahatonga ny olona hino fa fampitandremana ny fanafihana mananontanona izany.
Topi-maso kely ny hoe ahoana ny fifohazan'ny Silamo any Sri Lanka amin'izao fotoana izao. Trano, masikiriny sy orinasa maro no simba. #SriLanka pic.twitter.com/UhEMUJzqiF
Nanafika fivarotana lehibe iray an'ny Silamo tany Sri Lanka omaly hariva ny andian'olona Bodista mahery fihetsika.#terrorism pic.twitter.com/VrHNkda7Xe
Nodoran'ny vahoaka ny orinasa lehibe indrindra mpamokatra paty ao #LKA, izay Silamo no tompony. Vao nanomboka volana maromaro lasa ny asa tao amin'ity orinasa ity. Maherin'ny 70 % ny mpiasa Sinhaley miasa ao. Nisy vavolombelona nilaza fa andian'olona 500 farafahakeliny no nandrava ny orinasa.#Minuwangoda pic.twitter.com/0lMgFUYgXU
Toa misy ny famantarana fa ny vondrona Bodista mahery fihetsika no ao ambadik'ireny fanafihana anti-silamo ireny. Nisambotra olona 78 noahiahiana tamin'ny herisetra sy ny korontana indrindra tany Kurunegala, Kuliyapitiya, Nikaweratiya ary Chilaw ny polisy. Araka ny voalazan'ny manampahefana, efa voafehy izao ny toe-draharaha.
Nanara-maso ny lahatsary CCTV [fanarahamaso] ny polisy mba hahitana ireo ahiahiana marobe tamin'ny korontana goavana nanjaka nandritra ny andro vitsy lasa.Olona 78 hatramin'izao no voasambotra sy naiditra am-ponja vonjimaika- Mpitondratenin'ny Polisy #LKA #SriLanka #CommunalAttacksLKA pic.twitter.com/lOzeaCZzbp
Nangataka fandriampahalemana sy firaisankina tamin'ny Sri Lankey amin'izao fotoan-tsarotra izao i Gitendra E Chitty tao amin'ny Groundviews:
Mampiray antsika eo ambanin'ny anarana iray Sri Lanka ny sainam-pirenentsika sy ny hiram-pirenentsika, raha mifamono ny vondrom-piarahamonintsika dia manadino fa mamotika ny rehetra iray manontolo izy ireo. Mifohaza ianareo ary jereo ny dikan'ny hoe iray!#SriLanka pic.twitter.com/HtBCwZAdAV